पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग भएको सहमतिबारे प्रचण्डले खोले मुख, राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ! - jagritikhabar.com
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग भएको सहमतिबारे प्रचण्डले खोले मुख, राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग !
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भएको सहमतिबारे प्रष्ट पारेका छन्। आफू र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबीच पाँच बुँदे सहमति भएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै झुटको पराकाष्ठ भएको बताए।
उनले उक्त आरोप शतप्रतिशत झुटो भएको बताएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबारको एक कार्यक्रममा प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रबीच भारतमा पाँच बुँदे सहमति भएको र दुईजना बीचको साँठगाँठमा उपद्रव मच्चाइएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डले उक्त सहमति भएको कुरा प्रमाणित गर्न र प्रमाणित गर्न नसके माफी माग्न ओलीलाई चुनौती दिएका छन्। प्रचण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग प्रचण्डको पाँच बुँदे सहमति भएको थियो भन्ने शतप्रतिशत झुटो कुरा प्रचार गरेर उनले आफ्नो दरिद्र राजनैतिक चरित्र मात्र प्रदर्शन गरेका छन्। उनले अगाडि भनेका छन्, म केपी ओलीलाई,
पाँच बुँदे सहमति’ प्रमाणित गर्न र प्रमाणित गर्न नसके झुटो बोलेकोमा जनतासँग माफी माग्न चुनौती दिन्छु। प्रचण्डले अगाडि लेखेका छन्, दलाल पूँजीपति वर्ग र प्रतिगमनको राजनैतिक प्रतिनिधिका,
रुपमा देखापरेका एमाले गुटका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली, झुट, बेइमानी र धोकाको अर्को नाम हो भन्ने तथ्यलाई उनले हालैको आफ्नै अभिव्यक्तिबाट पुुनः प्रमाणित गरेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०६० साल मङ्सिर १८ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच पाँचबुँदे सहमति भएको दाबी गरेका छन्।
एमाले अध्यक्ष ओलीले बुधबार पार्टीका नवनियुक्त केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रका बीचमा सहमति भएर, सहमतिका साथ उपद्रव भएको बताए।
त्यसपछि ०६० साल मङ्सिर १८ गते ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डका बीचमा ५ बुँदे सहमति गरेरको उनको आरोप छ। के सहमति भएको थियो त्यो? कि ज्ञानेन्द्रले कि त प्रचण्डले भन्नुपर्‍यो नि। उनले भने, के सहमति भएको थियो? कसका विरुद्ध सहमति भएको थियो?
ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि ज्ञानेन्द्रले देशव्यापी अभिनन्दन कार्यक्रम चलाएको ओलीले बताए। उनले भने, त्यो सहमतिले गर्दा ज्ञानेन्द्रले अभिनन्दन कार्यक्रम चलाए देशव्यापीरुपमा। लोकतान्त्रिक शक्ति रुकुम, रोल्पामा पाइलो टेक्न नसक्ने,
नेताहरू जान नपाउने, त्यहाँ भएका नेताहरू मारिने। ज्ञानेन्द्र जाने र त्यहाँ धूमधाम स्वागत हुने। विराटनगर, यहीँ काठमाडौँमा पनि हामीले देख्यौँ, थापाथलीदेखि हिँडेर मंगलबजारसम्म उधुम स्वागत। को थिए स्वागत गर्ने ?
शपथ ग्रहण गरेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आगामी कार्यभारबारे निर्देशन दिने क्रममा केपी ओलीले नेपाली काँग्रेसलाई खराब तत्त्वहरूको साँठगाँठमा लागेको आरोप लगाए। उनले काँग्रेसलाई सच्चिन आग्रह गरे।
ओलीले भने, अस्थिरताका निम्ति औजार भएका व्यक्तिहरू क्रियाशील छन्। त्यस्तो कुरालाई प्रयोग गर्न पुरानो इतिहास बोकेको नेपाली काँग्रेस लागेको छ। तर, नेपाली काँग्रेसको इतिहास पनि के हो भने सधैँ बाहिरबाट हतियार ल्याउने।
नेपाली काँग्रेसले अहिलेसम्म खराब तत्त्वसँग साँठगाँठ गर्ने र देशभक्त र अग्रगामी, प्रगतिशील, वामपन्थी शक्तिका विरुद्ध जाइलाग्ने। सधैँ नेपाली काँग्रेसको नीति त्यही रह्यो।
अध्यक्ष ओलीले आगामी चुनावमा वामपन्थी शक्तिसँग एकता वा तालमेल होला कि भन्ने आफ्नै पार्टीका नेताहरूको आशालाई ‘भ्रम’को संज्ञा दिएका छन्। ओलीले सम्बोधनमा प्रष्ट शब्दमा भने,
अझै कतिपय साथीहरूमा कम्युनिस्ट एकता भन्ने छ। प्रचण्ड एण्ड कम्पनी र माकुने एण्ड कम्पनी, अस्थिरताका संवाहक तत्त्वहरू हुन्। कुनै भ्रम राख्नुपर्दैन, त्यस्ताहरूसँग एकता गरेर कहीँ पुगिन्छ रु त्यो एकीकरण सम्भव नै छैन। इमान्दार मेडिया बाट